Avo vaiti mazuva ekurura eCaps United akauya akaenda nekutora kwavakaita mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mwaka wapera vakapihwa mamwe mafungiro muRufaro Stadium nezuro apo Makepekepe akazvambaradza Ngezi Platinum Stars 3-0 ndokubvisa Madamburo pamusoro petafura yemakundano aya.
Vakaona mutambo uyu varikubvuma kuti maGreen Machine adzoka pamatambiro anodakadza avaiita gore rapera zvekuti zvibodzwa zviviri zvakabva kunaDominic Chungwa nechimwechete kubva kunaJohn Zhuwawu `zvishoma zvekuti hazvisi kuratidza kusvikirwa kwematambiro akaita maGreen Machine mumutambo uyu.
Makepekepe ingadai akabuda nezvibodzwa zvakawandisa zvekuti murairidzi weMadamburo Tonderai Ndiraya arikubvuma kuti chikwata chake chakakurirwa zviripachena achikorokotedza Caps United nekutamba zvinodakadza kwayakaita.
Kunyange kaputeni weNgezi Platinum Stars Partson Jaure anobvumiranawo nemurairidzi wake kuti maGreen Machine aive akasvikirwa zvekusavapa kana kamukana kadiki-diki zvako.
Vamwe varikufara nezvaitika izvi vatsigiri veDynamos avo vakauya nehuhwandu hwavo kuzokuzirira maGreen Machine kuti arove Madamburo kuitira kuti vasanyanyosiiwa nemapoinzi akawanda neNgezi iyo iri pamusoro peDynamos nemapoinzi mana.
Makepekepe haasati akundwa mumitambo mina yakateverana iyo yavakunda mumitambo mitatu nekuita mangange mumutambo mumwechete nekutora mapoinzi mapfumbamwe kubva pamapoinzi gumi nemaviri.
Asi mutevedzeri wemurairidzi wemaGreen Machine Fungai Kwashi anoti vatambi vake havafanire kukura musoro nezvaitika izvi achiti iye hondo ichiripo.
Kurova kwavakaita Madamburo uku kwasiya zvekare Caps United yakwira muhurongwa hweCastle Lager Premier Soccer League zvekuti vave pachinzvimbo chegumi nenhatu kubva pachinhanho chegumi nenhanhatu icho vaive vari svondo rapera.
Kukundwa kwakaitwa Ngezi Platinum Stars kwavabvisa pamusoro petafura vachitorerwa hutungamiri ne Chicken Inn iyo yakashanya muHarare ndokurova Black Rhinos 1-0 nemugovera nechibodzwa chakabva kunaMoses Jackson.
Chicken Inn yave nemapoinzi makumi mana nemashanu kubva mumitambo makumi maviri nemitatu, Ngezi Platinum Stars ndiyo irikutevera nemapoinzi makumi mana nematatu.
FC Platinum ndiyo iri pachinhanho chechitatu nemapoinzi makumi mana nemaviri mushure mekudambura Triangle 1-0, ichiteverwa neDynamos iyo ine mapoinzi makumi matatu nemapfumbamwe asi Dembare ine mitambo mitatu yavasati vatamba.
Mimwe mitambo yakatambwa mukupera kwesvondo yakapera seizvi
Bulawayo City 1-0 Harare City
Yadah 1-0 Chapungu
Shabanie 0-1 ZPC Kariba
Totarisa nhabvu yemhiri kwemakungwa
Sezvakaitwawo neCaps United, chikwata chine mukombe weEnglish Premier League cheChelsea chakanyadzisa avo vaichishora mushure mekushanya kuWembley ndokunorova Tottenham Hotspur 2-1 nezvibodzwa zvakandwa naMarcos Alonso.
Vanofunga kuti vanoziva zvenhabvu, vaive vototi maBlues ave nhoroondo apo chikwata ichi svondo rapera chakarohwa 3-2 pamusha neBurnley asi Chelsea yakasandura zvese izvi nekurova Tottenham iyo yaitarisirwa neveruzhinji kuti ichatora mapoinzi ese matatu.
Asi maBlues achiri nemutoro mukuru kuti asvike pamatambiro arikuita maRed Devils eManchester United ayo akaenderera mberi nekuzvambaradza zvikwata mushure mekubvarura Swansea 4-0, svondo rimwechete vachangobva kudambura West Ham 4-0 zvekare.
MaRed Devils ndiyo ari pamusoro soro pemakundano aya nemapoinzi matanhatu vachiteverwa ne Huddesfield iyo ine mapoinzi matanhatu zvekare mushure mekurova Newcastle 1-0 kuJohn Smith Stadium.
Liverpool haina kuda kusarira ndokurova Crystal Palace 1-0 vakatarisana nemutambo mukuru weEufa Champions League uyo varikutamba neHoffeinhein yekuGerman neChitatu.
Mimwe mitambo yeEnglish Premier League yakapera seizvi..
Southampton 2 -2 West Ham
Manchester City irkutamba manheru anhasi neEverton.
Zvikwata zvine mukurumbira pasi rese che Real Madrid pamwe necheBarcelona zvatanga makundano emwaka uno zviri mumafaro mushure mekunge Madrid yakazvambaradza Deportivo LaCoruna kunze kwemusha, Barcelona ichidamburawo Real Betis 2-0 pamusha wayo weNou Camp.
Toenda ku Germany. Bayern Munich yakasimudzira dziviriro yemukombe wayo nekurova Bayer Leverkussen 3-1 asi vanga vasirivega mukukunda uku sezvo Borrussia Dortmund yakafamba ndokunorova Wolfburg 3-0.